Bangladesh: Ireo Fifidianana 2008 Sy Ny Fikatrohana Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 6:23 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2008)
Hanao fifidianana i Bangladesh ny 29 Desambra 2008, fifidianana solombavambahoaka efa tena nandrasana fatratra. Fampielezankevitra mizotra amin'ny fomba tena samihafa amin'ny fifidianana filoham-pirenena natao vao tsy ela akory tao Etazonia, ka tany ireo median'ny olom-pirenena, ny fanentanana fifidianana sy ny fanangonambola, amin'ny aterineto, dia tena nanan-danja tokoa. Aterineto, izay tsy mahakasika afatsy ny 1% n'ireo mponina miisa 145 tapitrisa ao Bangladesh, tsy mbola tena media mahenika ny vahoaka. Ny andiantaranaka vaovao an'ireo blaogera sy ireo mpampiasa ny Facebook anefa miezaka mampiasa izay rehetra fahafahana natolotr'ireo media vaovao ireo. Mihahohaho ireo lahatsoratra miresaka ny fifidianana sy ireo adihevitra mahasoa amin'ny fifanakalozan-kevitra mahazatra feno hatezerana ifanaovan'ireo ideolojia politika mifanohitra any amin'ireo vovonana blaogy [teny bengali], sahala amin'ny Somewhere In, Sachalayatan, Amar Blog, Muktangan. Saingy ahoana no hahafahan'izy ireo misarika ny fiainana ara-politika raha toa maro amin'ireo mpanapa-kevitra, ny fitantanana faratampony sy tomponandraikitra ara-politika, no mijanona mihatakataka amin'ireo media an-tambajotra sy ny aterineto, ary tsy mifandray akory amin'ny adihevitra? Mbola mibaiko ireo media mahazatra ao Bangladesh, na dia eo andalam-panariana ny fahatokisan'ny mponina aza ny betsaka noho ny lahatsoratr'izy ireo mitongilana. Tsy ifandrimbonana ireo vohikala Aterineton'ireo antoko politika. Vitsivitsy amin'ireo kandidà monja, ao anatin'ireo an'arivony, no mampiasa aterineto ao anatin'ny fampielezankevitra ataon'izy ireo.
Nentim-paharazana ny fiainana politika ao Bangladesh, mifototra eo amin'ny kabary fandresena lahatra sy ny fampielezankevitra, ary kely ny fisian'ny fiarahamiasa amin'ireo izay hirotsaka aminà toerana mila fandraisana andraikitra bebe kokoa. Tsy dia misy lanjany betsaka eo amin'ny fandraisana fanapahankevitra ireo mpikatroka eny ifotony sy ireo olom-pirenena tsotra. Na izany aza, ny Jagoree [teny anglisy], vovonana iray tsy miandany izay mitodika amin'ireo tanora an'i Bangladesh, dia mampiasa Facebook sy blaogy mba hamporisihana ny fandraisana anjara ao anaty fiainana ara-politika sy ao anatin'ireo rafitra fandraisana fanapahankevitra, amin'ny alalan'ny fiofanana amin'ny maha olom-pirenena mandray andraikitra sy mahara-baovao.
Mitondra fanentanana iray atao hoe “Amader Vote, Amader Kotha” (Ny Latsabatonay, Ny Vatonay) ny Jagoree. Azo jerena ireo fanampim-panazavàna [teny anglisy] eo amin'ny pejy Facebook.
Fivorian'ny Jagoree. Sary nisy fahazoan-dalàna avy amin'ny Jagoree.
Ny zava-bitan'ny Jagoree vao haingana tena nahamarika dia ilay an'ny tahirin-kevitra [teny bengali] sy ny fametrahana azy tamin'ny tambajotra YouTube, mba hisy fiantraikany betsaka amin'ny mpihaino :
Ny tanjon'ity tahirin-kevitra maharitra 5 minitra sy 44 segondra ity dia ny hamporisihana an'ireo Bangladeshis mba hifidy amim-pahalalàna mandritra ireo fifidianana ho avy. Asehony ny fahakiviana manoloana ny politika ankehitriny sy ireo fanantenana fiovàna ananan'ireo tanora Bangladeshis.
Amin'ity indray mitoraka ity, marobe ireo torohay momba ireo kandidà sy ireo fifidianana no azo jerena amin'ny Aterineto. Tsy maintsy mikaroka vaovao ireo Bangladeshis mba hanaovany safidy tsara amin'ny fotoana handatsaham-bato.
SHUJAN, fikambanana iray ao Bangladesh izay manokantena ho amin'ny fanatsaràna ireo politikam-panjakana, dia manana vohikala iray [teny bengali] efa nahazo loka, izay mametraka an-tambajotra an'ireo vaovao marobe mikasika an'ireo kandidà. Ahitana ampahany maro isan-karazany io vohikala io: ireo vaovao ankapobeny mikasika ny fifidianana, ireo vaovao fampitahàna an'ireo kandidà isaky ny faripiadidiana, ary ireo maro hafa. Omen'ny SHUJAN ihany koa ireo tahirin-kevitra (izay azo anaovana fikarohana amin'ny alalan'ny anarana ao anatiny) , ahitana fampidirana maherin'ny 4 000 mikasika ny kolikoly nataon'ireo tomponandraikitra ara-politika, izay maro amin'izy ireo no mirotsaka amin'ireo fifidianana amin'ny desambra 2008.
Ny Vaomieram-pifidianana ao Bangladesh [teny anglisy] dia nametraka teo amin'ny tambajotra ihany koa an'ireo vaovao antsipirihany, tahaka ireo lisipifidianana, ny tombontsoan'ireo kandidà (izay azo trohana sy avoaka an-taratasy) ary ny torolalana ho an'ireo mpanaramaso nasionaly sy vahiny.
Ny E-Bangladesh [teny anglisy] dia mamoaka ireo rohy misy ireo vaovao manandanja rehetra mikasika an'ireo fifidianana sy ireo fandalinana, na ireo fampahalalambaovao, navoakan'ireo olom-pirenena mpanangona vaovao eo amin'ny pejin'izy ireo tsy tapaka, mikasika ireo fifidianana 2008. Ahitana ireo rohy miaraka amin'ireo angom-baovao ihany koa io vohikala io, sahala amin'ny lisitr'ireo kandidà na ireo fandaharanasan'ireo antoko politika. Mitovy karazana amin'io ihany koa ny vovonan'ireo blaogy [teny bengali] Amar Blog, izay manana ny pejiny mikasika an'ireo fifidianana, izay ahitàna ihany koa ireo vaovao sy fijery omen'ireo olom-pirenena.
Mametraka an'ireo fandalinana sy fanehoankevitra mikasika an'ireo fifidianana ihany koa ny vohikalan'ireo blaogy [teny anglisy] Unheard Voice.
Ny vovonana blaogy tena manandanja indrindra amin'ny teny Bengali somwhereinblog.net dia nanomboka vondrona iray an'ireo blaogy mikasika ny fifidianana [teny anglisy] iarahany miasa amin'ny gazety miteny anglisy The New Age. Manana vavahadin-tserasera ihany koa io gazety io mikasika an'ireo fifidianana [teny anglisy] izay mamerina ireo fantina lahatsoratr'ireo blaogy isan-karazany avy amin'ireo blaogy sy ireo lahatsoratra mivoaka isanandro. Io no voalohany ao Bangladesh mikasika ny fiarahamiasa ataon'ny iray amin'ireo gazety an-tsoratra goavana amina vovonan'ireo blaogy ivelan'ny gazety. Io vavahadin-tserasera io no hampita ara-potoana ireo vokatry ny fifidianana. Sarintany iray azo kitihana no maneho an-tsary tsirairay avy ny fitsinjaràna isaky ny antoko politika ny toeran'ireo niendaka.
Tsy tahaka ny ankamaroan'ireo kandidà hafa, ilay blaogera sady mpanao gazety Maskwaith Ahsan [teny bengali], izay mirotsaka ao amin'ny faripifidianana faha-6 ao Rajshahi, dia mampiasa Facebook ho an'ny fampielezankevitra.
Ny mbola ho jerena sisa dia ny fampiasain'ireo Bangladeshis ny media an'ireo olom-pirenena, ireo blaogy, ireo lahatsary (ohatra hoe ny YouTube), ireo sary (ohatra hoe ny Flickr), ny Twitter, sy ny sisa, mandritra ireo fifidianana ireo.